‘आज गएको नयाँ भुकम्प होइन, पराकम्प हो’ ! « MNTVONLINE.COM
‘आज गएको नयाँ भुकम्प होइन, पराकम्प हो’ !
काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकको रामचे आसपास केन्द्रविन्दु भएर ५.३ रिक्टर स्केलको भूकम्प पाँच वर्षअघि गोरखा केन्द्रविन्दु भएर गएको विनासकारी भूकम्पकै परकम्प भएको बताइएको छ । आज बिहान ५ बजेर १९ मिनेट जाँदा ६ रिक्टरको परकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको हो । यो नयाँ भूकम्प नभई गोरखा भूकम्प (७.६ रिक्टर स्केल) को परकम्प भएको केन्द्रका भूकम्पविद् लोकविजय अधिकारीले जानकारी दिए ।
बिहान सबेरै गएको परकम्पले राजधानी काठमाडौँ आसपासको भेगमा ठूलो धक्का दिएको छ । उपत्यकासहित आसपासका जिल्लामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो ।
भक्तपुरको लोकन्थली, बाल्कोट, ठिमीलगायत क्षेत्रमामा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस आत्तिएर कराउँदै घर बाहिर निस्किएका थिए । वि.सं. २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि हालसम्म ४ रिक्टर स्केलभन्दा माथिका ५५० भन्दा बढी परकम्प गएको केन्द्रले जनाएको छ ।